Kudzivirira katsi yangu kubva pamba | Noti Katsi
Kudzivirira katsi yangu kubva pamba
Sei kudzivirira katsi yangu kubva pamba? Ndiwo mubvunzo uyo isu tese tinorarama nehusikana takazvibvunza isu nguva nenguva. Uye ndezvekuti, zvisinei nekuzvipira kwenguva yakareba sei kwaari, kunyangwe tikamupa rudo rwakadii, kuda kuziva kwaanonzwa kuchamuendesa kuti abude nemusuwo nekukurumidza paanowana mukana, handiti?
Zvakanaka, chokwadi ndechekuti zvinoenderana. Chaizvoizvo hongu Tinogona kuita zvinhu zvakawanda kuita kuti furry inzwe kugadzikana mukati meimba zvekuti havazove nechido chakasimba chekubuda panze, saka zvichave nyore kuti ive inodzorwa. Haunditendi here? Ramba uchiverenga, edza aya matipi uye iwe uchaona kuti nekukurumidza sei pane gare gare iwe unotanga kuona shanduko mune yako furry.
1 Nzira yekuita kuti kati yako isade kubuda mumba
1.3 Mupe zvese zvaanoda
1.4 Shandisa nguva yakanaka nekati yako
1.5 Rara naye
1.6 Mupe mumwe wako
1.7 Dzivirira katsi yako
2 Inguva yakareba sei iwe unogona kusiya katsi yako yega?
3 Chii chaunofanira kuita kana iwe ukaenda kuzororo?
Nzira yekuita kuti kati yako isade kubuda mumba
Katsi (kunyanya varume uye kunyangwe ivo vasina neutered) vanogona kuve nechishuwo chekubuda voongorora nyika. Kunyangwe kana iwe ukatevera aya anotevera matipi, iwe ungazoona kuti kamwe kamwe, katsi yako ichada kugara pamba nekuti iye ane zvese zvaanoda.
Katsi vanhu vehukama vanoda kukurudzirwa uye kudyidzana, saka kana iwe ukapa izvi zuva nezuva, havazonzwa kudiwa kwekuenda kunze kuti vazvitsvage. Pedza nguva yemhando yepamusoro neyechipfuwo chako zuva rega rega, sarudza izvi pane rako rezuva nezuva rekuita-rondedzero! Pane zvimwe zviratidzo zvinogona kukuudza kuti katsi yako yakasurukirwa zvakanyanya:
Anotevera iwe pamba uye anogara achitsvaga kutariswa
Wira zvinhu zvako sechiratidzo chekuti anokutsamwira
Makati, sevanhu, zvinhu zvakajairika. Ichi ndicho chikonzero ivo vachida maitiro muhupenyu hwavo hwezuva nezuva uye kuti ivo vari padivi pako. Kumuka, nguva yekudya, nezvimwe. Vanoda imba yavo uye kana maitiro avo achichinja chero, katsi yako inogona kunzwa kunetsekana kana kutonetseka. Kuchinja maitiro uye kusiya katsi yako wega kwenguva yakareba inogona zvakare kuve yakashata tsika yekuchinja ruzivo uye kutsvaga nzira yekuchinja izvo nekuenda kunze.
Mupe zvese zvaanoda
Mupe kutamba, kudanana, kushamwaridzana, maitiro, katsi shamwari kana zvichibvira ... katsi yako, kana achinzwa kugadzikana uye akasimbiswa mumba mako, haazonzwa kuda kusiya imba. Uye zvakare, kumuregedza ndiko kuisa njodzi yechinhu chakaipa chichiitika kwaari, senge tsaona, kurwa pakati pemakati, kurwara, kurohwa nemotokari, nezvimwe.
Shandisa nguva yakanaka nekati yako
Hazvina kufanana kuti uve mukamuri, iwe ugere pachigaro uye katsi yako pasi, pane kuva vaviri pamwe chete pachigaro kana pasi muchitaurirana. Kune vanhu vanofunga kuti katsi haidi mhando yekutarisirwa iyi, kuti yakasununguka kwazvo uye kuti kuti ifare inokwana pachayo, asi kufunga kuti iko kukanganisa.
Kana iwe ukasabatana naye, kana ukasatamba naye uye kana ukasamupa rudo, hatigone kutarisira kuti ade kuva nesu patinonzwa kuda. Naizvozvo, kana tichida kuti ive katsi rinofara, pamwe nekushamwaridzana, tinofanira kushandisa nguva yakawanda sezvatinokwanisa. Uye zvakare, isu tinofanirwa kuziva kuti netambo yakapusa kana bhora diki zvese iye uye isu tinogona kuva nenguva yakanaka.
Kurara nekatsi? Hongu nei? Kana iwe uchinetseka nezve zvipembenene, makiriniki ezvokurapa uye zvitoro zvezvipfuyo zvinotengesa antiparasitics iyo inobvisa zvese zvipenga zvekunze (Zvikwekwe, nhata, nezvimwewo) uye zvemukati (Earthworms). Chero kana iwe uine allergy iyo mhuka kana kuti iyo furry iri kurwara, sarudzo yakanakisa ndeyekudzivirira kukwira pamubhedha wako, asi neimwe nzira ... kurara nekatsi ndiyo pembedzo yakakwana yekusimbisa hukama.
Uye kati inopedza husiku nemunhu wayo, ihohwe rinonzwa kudiwa kwazvo. Saka haufanire kutsvaga rudo kunze.
Mupe mumwe wako
Chero bedzi isu tichigona, uye chero bedzi tine katsi inoshamwaridzana, zvingave zvinonakidza kumupa shamwari yekati iyo yaanogona kutamba nayo isu patinoenda, uye wadii wadaro? Saka imba iyoyo inopetwa kaviri. Ini pachangu ndinogara ne5 felines avo, kunyangwe vaine mvumo yekubuda kunze sezvo tichigara munharaunda yakanyarara, vanoenda kunze kwechinguva chidiki mangwanani uye imwe nguva masikati, uye vanopedza zororo rezuva vachirara uye kutamba.
Mudiki (Sasha, akazvarwa muna 2016, naBicho, muna2017) havabude zvachose, uye zvinofadza kuvaona vachimhanya. Kana vanhu vakuru vasvika (Keisha ane makore manomwe, Benji ane makore mashanu, uye Susty ane makore gumi nerimwe), vanoita semhuri yakabatana; zvakanaka. Ichokwadi ndechekuti Susty yakawedzera mugwagwa kupfuura imba, uye iri chaizvo, yakazvimiririra. Asi pamwe nevamwe vane nguva yakanaka.
Saka, chaizvo, kana iwe uchikwanisa kutarisira katsi yechipiri uye iwe uchifarira mhuri iri kukura, usazeze. Ehezve, kuti zvinhu zvese zvifambe zvakanaka kubva pazuva rekutanga, ndinokurudzira kuti utevere rairo yedu.
Dzivirira katsi yako
Kana isu tisingadi kurega katsi ichimbobuda mumba, kungave nekuti tichigara muguta kana mudhorobha rine vanhu vakawanda, kana nekuti tiri kutyira kuti chimwe chinhu chingaitika kwachiri, tinofanirwa kuita zvese zvatinogona kuti chidzivise kubva . Uye izvozvo zvinoitwa sei? Kuisa mambure pamahwindo iyo yatinogona kuwana iri kutengeswa muzvigadzirwa zvemhuka zvitoro, zvese zvepanyama uye online Pano tinokusiya iwe uine zvimwe zvinopihwa kuti iwe ugone kuzviwana zviri nyore:
PiuPet® - Cat Mambure ...
lionto Net for cats net...
Saizvozvowo, tinofanira iva nemusuwo wemba wakagara wakavharwa, sezvo pakusava nehanya kushoma huni hunogona kubuda.
Inguva yakareba sei iwe unogona kusiya katsi yako yega?
Chimwe chikonzero katsi inoda kubuda mumba inyaya yekuti iri yega uye inoda kuve nezviitiko. Pamusoro pekufunga nezvezano ratakupa pamusoro apa izano rakanaka kuva nekatsi shamwari yekitsi yako uye kuti vanochengetana kana iwe usipo, zvakare zvakakosha kuti iwe uzive kuti yakareba sei uchifanira kusiya katsi yako yega, kana usingakwanise kuva nekatsi rinopfuura rimwe nekuda kwechikonzero chipi zvacho.
Kunyangwe chiri chokwadi kuti katsi dzinozivikanwa nekusununguka kwavo, chokwadi ndechekuti vanoda kambani uye rudo nguva dzese. Kana vakapedza nguva yakareba vari voga pamba, vanogona kusafara uye kutomboora moyo.… Uye ndicho chikonzero nei vamwe vachitiza kana kuda kubva pamba.
Chaizvoizvo hapana chinoitika nekuti unovasiya zuva rimwe kana maviri chete kana vaine zvavanoda zvekuchengetwaAsi kwenguva yakareba ivo vanogona kuve neyakaoma nguva pamoyo uye nekuwedzera kana vasina wekutamba naye. Katsi yako haifanirwe kusiiwa iri yoga kwenguva yakareba.
Kana iwe ukaenda kuzororo haufanire kusiya katsi yako yega kwenguva refu nekuti kunyangwe iine mukana kune yavo marara bhokisi, mvura uye chikafu, kune zvimwe zvikonzero zvinogona kuita kuti itange kuda kubva pamba uye kuongorora nyika.
Chii chaunofanira kuita kana iwe ukaenda kuzororo?
Kana, semuenzaniso, katsi yako ine chirwere chisingaperi uye ichida mushonga, chakanakira kuisiya mumaoko akanaka, senge muchipatara chezvipfuyo kwavanogona kuitarisira zvese.
Imwe pfungwa ndeyekuti kana ukaronga kubva pamba kwenguva yakareba uye kati yako haina chero chirwere chisingaperi, unogona kuudza shamwari kana vavakidzani kuti vamire nepamba pako kuti vachengete kati yako. Iyo ndiyo isinganetsi sarudzo yekati uye inonyanya kubatsira kwauri. Iwe unogona zvakare kubhadhara kune anovimbwa nyanzvi yechipfuwo yekugara kuti uchengete kati yako mumba mako iwe uchinge usipo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Noti katsi » Katsi » Curiosities » Kudzivirira katsi yangu kubva pamba
Gloribel Perez Hernandez akadaro
Makadii, ndinonakirwa nekatsi uye ndine vaviri, mudiki ane mwedzi mitatu uye ane makore mana uye havadanani, mudiki ane godo, haaone kuti ndinopa rudo kune mukuru, anomuruma, uye kana ndiine dambudziko iro anonyorova zvakanyanya asi pandinomubata chete vobva vandirasa uye zvinorwadza ndipo pandakarasikirwa neiyo iyo kunyangwe panguva imwechete yandinochema iye kana ini ndichimuyeuka, ini ndinoda felines kunyangwe zvikandiita njodzi.
Pindura Gloribel Perez Hernandez
Pamwedzi mitatu iyo katsi inoda kutamba, uye kuita kudaro inonamira uye inoshungurudza mukuru nekuti… imbwanana. Nekufamba kwenguva katsi yakakura ichakwanisa kumisa tsoka dzayo (kana kuti, matinji ayo). Iwe unogona zvakare kudzidzisa kwete kuruma ikozvino usatsvage nemoyo murefu nekutsungirira.
Mhoroi, ndine (murume) katsi ari kungosvitsa gore rimwe chete, asi akarasika, amai vangu vakatanga kusamufarira sezvo kati yakanga izere nevhudzi asi ... rimwe zuva ndakamuburitsa kuchivanze uye ipapo ndakamurega achirara kunze uko Mboro yakatanga kujaira asi yaingova mazuva gumi nemashanu chete, ndobva ndamugezesa etc nezvimwe ndokumutendera kuti apinde zvakare asi pakatanga kuve nemamwe matambudziko, uye ndinomubuditsa zvakare .. .asi iye zvino anodzinganisa katsi ndakamuisira juzi rake nekuda kwechando ndinomusiira kassia yake inodziya uye CHikafu uyezve kune katsi dzinouya kuzomubvisa ndokumupinda uye izvo zvinoita kuti varwe, asi kubvira katsi yakanyanya kushatiswa haarwe uye nekuti dzimwe nguva vanomukuvadza uyezve katsi iyo nekusada kuva nepamuviri inomurova ipapo nekuti pandakatanga kuona iko kusagadzikana kusvika pandakaudza amai vangu kuti vakamukuvadza, saka takafunga kuichengeta husiku (tine furati mubindu), uye ipapo akatanga kudzikama asi iyezvino Amai vangu vafunga kuibudisazve uye nhasi chichava chake chekutangakuswera kunze uye zvinondityisa kuti ndizvisiye ipapo nekuti katsi kana katsi yakamurova uye chokwadi ndechekuti, sezvo aparara zvakanyanya, haazive kuzvidzivirira zana, ta, zvakanaka ndinotya kuti anodya chinhu kana chimwe chinhu chikaitika kwaari kana pachinzvimbo haadzoke, nekuda kwechikonzero ichocho ini ndakaenda kuno, ndakafunga zvekumukandira asi kunyangwe zvakadaro amai vangu havamude mukati kana mumba, chii chandingaite?, ndapota pindura nekukurumidza.
Kumubata iye ingave mhinduro. Izvo zvaizodzivirira matambudziko akatorwa kubva pahunhu hwekupisa (sedzimwe katsi dzinorwa nayo), uye sezvineiwo zvaizodzorawo njodzi yekusiiwa kwemhuka
Mhoroi, ndine Siamese ane mwedzi mishanu uye haana pekugara asi ini handina imba yangu yekuvhara mahwindo uye ndoimwe nzira yekuti asabve? chimwe chinhu chakagadzirwa noc semushonga?
Pindura kuna rai
Zvinokurudzirwa kumutora kuti achekwe, nekuti nenzira iyi haazove nechishuwo chakanyanya kana kuda kuve kunze.
Iwe unogona zvakare kuisa netting pamahwindo, ayo akakosha zvishoma uye anogona kuponesa hupenyu.
Margaret Valencia akadaro
Mhoroi, ndine katsi ine mwedzi mitatu uye imbwa diki ine gore-gore, vanoshivirirana uye dzimwe nguva vanotamba vanoziva kuti vese chikamu chemba yangu ... mubvunzo wangu ... inogona kuve shamwari yakanaka yekiti yangu kana inogona zvakare imbwa?
Pindura Margarita Valencia
Mhoro Margie kana Mhoro Margarite.
Izvo zvinoenderana nekitsi yega yega. Nenzira imwecheteyo yatinoita isu, kwete katsi dzese senge katsi dzese kana imbwa.
Zvino, ini zvakare ndichakuudza kuti kana iwe ukawiriranwa nembwa, kuisa mune yechipiri katsi kunogona kukanganisa zvese.
Dzimwe nguva zviri nani kuti usazviisa panjodzi uye kusiya zvinhu sezvazviri.
Katsi yangu yaive pamba, akarwara uye ndaifanira kumupa mushonga nechisimba, uye kubva ipapo akatanga kurasika uye anongodya chete, handizive kuti ndomuita sei adzokere uye haadaro ndoda kuenda, ndapota ndibatsireiwo
Iwe unofanirwa kutora mukana wenguva yaunopedza naye. Gara padhuze naye, mupuruze zvinyoro nyoro paanenge achidya (uye kanoverengeka, zvakajairika kuti haasiye zvinopfuura izvozvo), vhura uye uvhare maziso ake zvishoma nezvishoma paunenge wakamutarisa (saka uchamuudza kuti unomuda), Gara kana kurara pasofa womukoka, tamba naye nebhora kana tambo.
Nokushivirira, iwe unogona zvakare kuwana chivimbo chavo.
Kana kittens dzotanga kuzvisunungura